Banyere Anyị - Shanghai Yubing Equipment Co., Ltd.
Anyị bụ ndị na-eduga emeputa nke elu àgwà jụrụ akụrụngwa (ekpuchi-emeghe ma na-emechi-circuit coolers, evaporative condensers na ikuku oyi) na mkpa mmiri ọgwụ na akụrụngwa (RO mmiri ọgwụgwọ, filtration na Ultra-filtration, Water softening, Chemical Dosing System and MBR Waste -Ọgwụgwọ mmiri) na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20 ihe ọmụma na ahụmịhe.
Ruo ọtụtụ iri afọ, anyị enyela ndị ahịa anyị ezigbo akụrụngwa na ọrụ dị iche iche ma bụrụ ndị anyị maara nke ọma n'ọtụtụ ụlọ ọrụ gụnyere ike, mmanụ na gas, ụlọ ọrụ dị arọ, ụlọ ọrụ petrochemical, osisi ike, mmanụ mmanụ, pulp & igwe igwe, factlọ mmepụta ihe ndị e ji ígwè mee, ihe ndị a na-egwupụta akụ, ebe a na-ere nri na akụrụngwa ahaziri maka obodo dịka ụlọ ọrụ ebe a na-arụ ụgbọ okporo ígwè.
N'oge imekọ ihe ọnụ na ndị ahịa na ulo oru ubi, e nyere anyị ka anyị na-enye ndị dị mkpa ọgwụgwọ mmiri akụrụngwa ekpuchi isi iyi nkọwa na-ekpofu-mmiri imegharị ihe maka usoro. Ahụmịhe a na-adịghị ahụkebe na ọkachamara omimi emeela ka anyị bụrụ ọkachamara n'ọhịa a.
Ndi oru injinia anyi bu ndi okacha amara n’ime imeputa ulo elu di elu iji bulie oru oma ma na-ekwenye na ha kwesiri ekwenye na ndi oru anyi nwere ike imeghari ka ndi ahia anyi mara ihe dika ichota ebe, mmiri na mmiri. ogo ikuku, ọnụahịa enyocha, ịdị mfe nke ọrụ yana iguzosi ike n'ezi ihe ogologo oge na ọkachamara na ụlọ ọrụ.
The ike otu nke ice na-atụ anya ikwado aka iso ibe ịga nke ọma na ndị ahịa anyị n'ụwa nile.
Nye ngwaahịa na ọrụ na-arụpụta ihe na-arụpụta ihe, akụnụba na ogologo oge
mkpa na atụmanya nke ndị ahịa anyị.
- ANYA ANY--
Anyị jụrụ ụlọ elu na-iji na-adigide na
nwere obere mmetụta gburugburu ebe obibi.
- ANY M ANY M
Ahụmahụ ọkachamara + Ngwa nhazi dị elu + Ndị ọrụ aka ọrụ n'okpuru koodu omume enyere
site na Ogo Management System = 100% afọ ojuju ngwaahịa
- Uru anyị -
Okwu mmalite nke n'ichepụta ihe
Ice mmepụta saịtị emi odude ke Shandong Province nke nwere uru na-ọma onwem akụrụngwa, zuru ezu ọkachamara ọrụ na ala ego, na obodo na-akwado iwu na ọhụrụ na technology mma.
A na-etinye ntinye aka na ụlọ ọrụ anyị iji mepụta ngwaahịa dị elu na njirimara asọmpi, ka ọ dị ugbu a, ọ na-enye mgbanwe maka usoro oge na ikike mmepụta, ọkachasị maka ọrụ ahaziri iche.
Lọ Ọrụ Na-arụpụta Ihe